Anatomical मुद्दाहरू सधैं एक निश्चित ब्याज गरिएको छ। आखिर, तिनीहरू सीधा हामीलाई प्रत्येक चासोको विषय। लगभग सबै कम्तिमा एक पटक, तर म आँखा छ के मा रुचि थियो। यो हो - सबैभन्दा संवेदनशील अर्थमा अंग। यो नेत्रहीन, हामी जानकारी को बारेमा 90% प्राप्त आँखा मार्फत छ! % मात्र9- श्रवण को सहायता संग। र 1% - अन्य शरीर द्वारा। ठीक छ, आँखा संरचना - साँच्चै एक रोचक विषय हो, त्यसैले यो धेरै विवरण विचार गर्न आवश्यक छ।
तपाईं शब्दावली सुरु गर्नुपर्छ। मानव आँखा संवेदी अंग तरंग दैर्ध्य को अप्टिकल दायरामा विद्युत विकिरण महसुस जो जोडीएको छ।
यो शरीर को भित्री कोर घटेका झिल्ली हुन्छन्। जो, बारी मा, नेत्रोद, स्फटिक लेन्स र समावेश काँच समान शरीर। तर यो - एक सानो पछि।
आँखा छ के कुरा, विशेष ध्यान यसको खोल भुक्तान गर्नुपर्छ। तीन। पहिलो - बाह्य। बाक्लो, fibrous, यो eyeball बाह्य मांसपेशीमा संलग्न। यो खोल एक सुरक्षा समारोह छ। र अझै यो आँखा को आकार निर्धारण गर्ने त्यो थियो। को कर्निया र sclera को निर्वाचकगण।
Tunica थप भास्कुलर भनिन्छ। यो चयापचय प्रक्रियाहरू लागि जिम्मेवार छ आँखा पोषण प्रदान गर्दछ। यो आइरिस, ciliary शरीर र choroid हुन्छन्। केन्द्र मा छात्र छ।
र भित्री खोल अक्सर नेट भनिन्छ। आँखा को रिसेप्टर, र जो त्यहाँ हल्का र CNS जानकारी को प्रसारण को धारणा छ। सामान्य मा, तपाईं संक्षिप्त मा बता गर्न सक्छन्। तर, शरीर प्रत्येक घटक धेरै महत्त्वपूर्ण छ देखि, हामी व्यक्तिगत तिनीहरूलाई प्रत्येक को ध्यान असर पर्छ। त्यसैले आँखा छ के को एक राम्रो समझ प्राप्त गर्न।
त्यसैले यो हो - eyeball, बाहिरी झिल्ली को घटक, साथै हल्का-refracting पारदर्शी मध्यम सबैभन्दा convex भाग। कर्निया एक convex-concave लेन्स जस्तो देखिन्छ।
यसको मुख्य घटक - एक संयोजी ऊतक stroma। अगाडि कर्निया stratified epithelium द्वारा कवर। तर, वैज्ञानिक शब्द धारणा मामलामा धेरै सरल छन्, त्यसैले यो विषय लोकप्रिय छ व्याख्या गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। को कर्निया को मुख्य गुण - एक sphericity, specularity, पारदर्शिता, संवेदनशीलता र रक्त नली को अभाव।
माथिको कारण र शरीर को यो भाग को "उद्देश्य" सबै। सार मा, कर्निया - लेन्सको डिजिटल क्यामेरा जस्तै हो। दुवै एक र अन्य सङ्कलन र इच्छित दिशा मा प्रकाश रेज केंद्रित एक लेन्स छ किनभने पनि संरचना तिनीहरूले समान छन्। यो मध्यम refracting को समारोह छ।
आँखा छ के कुरा, यो तर त्यो सम्झौता छ जसलाई संग ध्यान र नकारात्मक प्रभाव पार्ने, असर गर्न सक्दैन। कर्निया, उदाहरणको लागि, सबै भन्दा बाह्य stimuli कमजोर। अधिक सटीक हुन - धुलो गर्न, प्रकाश, हावा र माटो मा परिवर्तन। बित्तिकै केहि वातावरण मा परिवर्तन रूपमा, त्यसपछि त्यहाँ परेलिहरु (रङमा पिल पिल), photophobia को समापन छ, र आँसु प्रवाह गर्न थाल्छन्। त्यसैले, हामी क्षति विरुद्ध सक्रिय सुरक्षा भन्न सकिन्छ।
केही शब्दहरू आँसु बारेमा भने गर्नुपर्छ। प्राकृतिक जैविक तरल पदार्थ - यो छ। त्यो lacrimal ग्रंथि उत्पादन। एक विशेषता सुविधा - एउटा सानो Opalescence। यो अप्टिकल घटना, ज्योति तीव्र dissipate थाल्छ जो मार्फत, वातावरण को छवि गुणस्तर र धारणा असर जो। Lacrimal तरल पदार्थ 99% पानी छैन। एक प्रतिशत - यो म्याग्नेसियम कार्रोप्नेट, सोडियम क्लोराइड, र अर्को क्याल्सियम फस्फेट छ अकार्बनिक पदार्थ हो।
आँसु जीवाणुरोधी गुण छ। तिनीहरूले धोए पनि eyeball। र यसको सतह यसरी धूलो, विदेशी वस्तुहरु र हावा को प्रभाव बाट सुरक्षित रहनेछ।
आँखा अर्को घटक - को परेलाहरु छ। माथिल्लो पटल मा आफ्नो नम्बर बारेमा 150-250 छ। 50-150 - जमीनमा। सुरक्षा - र परेलाहरु को मुख्य कार्य आँसु को कि जस्तै हो। तिनीहरूले आँखा, बालुवा, धूलो को सतहमा माटो को ingress रोक्न र जनावर को मामला मा - साना कीराहरू।
तसर्थ, बाहिरी जो देखि, कि माथि भनिएको छ आँखा को कोटिंग छ। अब तपाईं औसत बारेमा बताउन सक्छ। स्वाभाविक, हामी आइरिस बारेमा कुरा गर्नेछन्। त्यो एक सूक्ष्म र सार्दा डायफ्राम छ। बस लेन्स अगाडि - यो कर्निया र क्यामेरा बीच आँखा पछि स्थित छ। यो छ कि यो व्यावहारिक प्रकाश प्रसारित गर्दैन रोचक छ।
को आइरिस अप यसको रंग र परिपत्र मांसपेशीमा (कारण आफ्नो लागि निर्धारण कि Pigments बनेको छ यो छात्र साँघुरो)। खैर, आँखा को यो भाग पनि तहहरू समावेश गर्नुहोस्। मात्र दुई तिनीहरूलाई - mesodermal र ectodermal। यो melanin समावेश रूपमा पहिलो, आँखाको रंग लागि जिम्मेवार छ। दोस्रो तह एक रोगन कक्षहरू fustsinom समावेश गर्दछ।
एक व्यक्ति छ भने नीलो आँखा, छाडा को त आफ्नो ectodermal तह र साना melanin समावेश गर्दछ। यो रंग को stroma मा प्रकाश फैलिएको को परिणाम हो। सोही, तल्लो यसको घनत्व - अधिक संतृप्त रंग छ।
नीलो आँखा जीन HERC2 मा एक उत्परिवर्तन संग मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले melanin को एक न्यूनतम उत्पादन गरेको छ। यस मामला मा stromal घनत्व अघिल्लो मामला मा भन्दा उच्च छ।
सबैभन्दा हरियो नजरमा melanin। खैर, रंग को गठन मा रातो कपाल जीन को महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। शुद्ध हरियो रंग धेरै दुर्लभ छ। तर यदि त्यहाँ एक को छाया गर्न "सङ्केत" कम्तीमा छ, तिनीहरूले जस्तै भनिन्छ।
अझै melanin को सबैभन्दा खैरो आँखा मा निहित। तिनीहरू सबै ज्योति अवशोषित। उच्च र कम आवृत्तियों संग रूपमा। एक परावर्तितप्रकास एक खैरो छाया दिन्छ। खैर, मूल, वर्ष धेरै हजारौं पहिले, सबै मान्छे खैरो-आँखाहरू थिए।
त्यहाँ कालो छ। रंग आँखा तिनीहरूलाई सबै प्रविष्ट कि हल्का पूर्ण अवशोषित हुन्छ धेरै melanin समावेश गर्दछ। र तरिका द्वारा, अक्सर "संरचना" लगाउँछ र eyeball एक grayish रंग छ।
यो पनि मानव आँखा मा के बताइरहेका, उल्लेख गर्नुपर्छ ध्यान। यो केवल sclera (प्रोटिन खोल) अन्तर्गत स्थित छ। यसको मुख्य विशेषता - आवास। कि, तेजी पर्यावरण अवस्था परिवर्तन भिज्न छ क्षमता। यस मामला मा, यो अपवर्तनी शक्ति परिवर्तन बुझाउँछ। सरल आवास स्पष्ट उदाहरण: हामीले ठीक मुद्रण प्याकेजिङ्ग मा के लेखिएको छ पढ्न चाहनुहुन्छ भने - हामी हेर्न र शब्दहरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईं दूरी मा केहि हेर्न आवश्यक? हामी पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्षमता, यो स्पष्ट दूरी मा स्थित वस्तुहरु बुझ्ने हाम्रो क्षमता छ।
निस्सन्देह, मानव आँखा मा के कुरा, यो छात्र बारेमा भूल गर्न सक्दैन। यो पनि बरु "गतिशील" यो को भाग हो। को छात्र को व्यास छैन निश्चित छ, तर निरन्तर साँघुरो र चौडा। यो आँखा मा आउने प्रकाश को धारा नियमन छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। छात्र, आकार मा बदलिने, सूर्य गरेको रेज पनि उज्ज्वल एक विशेष स्पष्ट दिनमा "बन्द कटौती", र रूपमा कुहिरो मौसम वा राति सकेसम्म धेरै गर्न अनुमति दिन्छ।
को छात्र रूपमा आँखा यस्तो अचम्मको भाग मा, ध्यान गर्नुपर्छ। यो सायद सबैभन्दा चर्चा अन्तर्गत विषय मा असामान्य छ। किन? छैन कम्तिमा किनभने आँखा एक छात्र के गठन, को प्रश्नको जवाफ हो कि - केही बाहिर। वास्तवमा, यो छ! सबै पछि, छात्र - यो eyeball को Tissues मा एक प्वाल। तर अर्को यो कि यो माथि उल्लेख समारोह गर्न अनुमति मांसपेशिहरु छन् गर्न छ। कि, प्रकाश बाटो छ।
अद्वितीय मांसपेशी एक स्फिन्क्टर छ। यो आइरिस को एक किनारा भाग घेरने। स्फिन्क्टर प्रत्येक अन्य संग intertwined फाइबर हुन्छन्। अझै पनि त्यहाँ dilator - को छात्र विस्तार को लागि जिम्मेवार छ कि पेशी छ। यो उपकला कक्षहरू हुन्छन्।
अर्को रोचक तथ्य ध्यान उल्लेख गर्नुपर्छ। आँखा औसत धेरै तत्व हुन्छन्, तर छात्र - सबैभन्दा नाजुक। तपाईं चिकित्सा तथ्याङ्क विश्वास गर्नुहुन्छ भने, जनसंख्याको 20% anisocoria भनिन्छ विकृति पूरा गर्दछ। यो pupils विभिन्न आकार हो जसमा सर्त छ। तिनीहरू अझै पनि विकृत गर्न सकिन्छ। तर यी 20% लक्षण सबै उच्चारण छैन। सबैभन्दा पनि उपस्थिति anisocoria बारेमा थाहा छैन। धेरै मानिसहरू मात्र चिकित्सकको यात्रा, मान्छे निर्णय जो मा, धमिलो भावना, पीडा, ptosis (माथिल्लो पटल को drooping), आदि पछि यो थाह बन्न तर केही diplopia हुन्छ - "डबल छात्र" ..।
यो - यो, मानव आँखा मा के कुरा उल्लेख गर्न विशेष ध्यान गर्नुपर्छ भनेर भाग। रेटिना पातलो झिल्ली, को काँच समान निकाय राम्ररी आसन्न छ। जो, बारी मा, eyeball को 2/3 भरिन्छ के छ। काँच समान अधिकार आँखा र immutable फारम दिन्छ। र पनि हल्का रेटिना प्रवेश refracts।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, आँखा तीन गोले हुन्छन्। तर यो छ - मात्र जग। सबै पछि, रेटिना को 10 तहहरू बढी छ! र यसको दृश्य भाग सटीक हुन। त्यहाँ जो कुनै photoreceptors छन्, "अन्धो" अझै पनि छन्। यो भाग ciliary र आइरिस विभाजन गरिएको छ। तर यो दस तहहरू फर्केर जान आवश्यक छ। पहिलो पाँच हो: रंग, fotosensorny र तीन बाह्य (झिल्ली, दानेदार र spletenievidny)। यस्तै नामहरू बाँकी तहहरू। यो तीन आन्तरिक (दानेदार पनि spletenievidny र झिल्ली), र थप दुई, माथि ताकत फाइबर बनेको छ, एक को, र अन्य - को नाडीग्रन्थि कक्षहरू देखि।
तर ठ्याक्कै के दृश्य acuity लागि जिम्मेवार छ? कि माथि आँखा बनाउन भागहरु - यो रोचक छ, तर यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा मनमोहक थियो। त्यसैले, दृश्य acuity लागि रेटिना को केन्द्रीय fovea पूरा गर्दछ। यो पनि "पहेंलो स्थान" भनिन्छ। यो एक गोलो आकार छ र छात्र अगाडि स्थित छ।
रोचक अर्थमा अंग - हाम्रो आँखा। के म हुँ - माथि सौजन्य। तर अझै पनि त्यहाँ केही पनि photoreceptors बारेमा भने थियो। र, बारेमा थप सटीक हुन, छड र शंकु रेटिना मा स्थित। तर यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण घटक छ।
तिनीहरूले भन्ने ओप्टिक तंत्रिका को फाइबर को CNS मा आउछ जानकारी ज्योति उत्तेजना को परिवर्तन गर्न योगदान।
शंकु अत्यधिक प्रकाश संवेदनशील छन्। र सबै किनभने iodopsin सामग्री को। यो - रंग दृष्टि प्रदान गर्दछ कि रोगन। iodopsin गर्न पूर्ण विपरीत - त्यहाँ rhodopsin छ, तर यो छ। यो रोगन रात दृष्टि लागि जिम्मेवार भएकोले।
राम्रो 100 प्रतिशत दृष्टि संग एक व्यक्ति, त्यहाँ बारेमा 6-7 लाख शंकु छन्। चाखलाग्दो कुरा, तिनीहरूले छडी भन्दा (तिनीहरूले बुरा 100 पटक छ जो) प्रकाश कम संवेदनशील छन्। तथापि, राम्रो तीव्र आन्दोलनहरु बुझ्ने। लाठी, खैर, अधिक - 120 मिलियन। तिनीहरूले बस उखानमा rhodopsin फेला परेन।
यो रात मा मानव दृश्य क्षमता प्रदान sticks। राति शंकु सक्रिय सबै छैनन् - तिनीहरूले कम्तिमा फोटोन को एक न्यूनतम प्रवाह (प्रकाश) काम गर्न आवश्यक छ किनभने।
तिनीहरू पनि कि माथि आँखा बनाउन भागहरु छलफल, कुरा गर्न आवश्यक छ। मांसपेशीमा - यो आँखा सकेट मा स्याउ को प्रत्यक्ष व्यवस्था के अनुमति दिन्छ। तिनीहरू सबै कुख्यात बाक्लो संयोजी ऊतक छल्ले देखि Originate। उनि एक कोण मा eyeball संलग्न छन् किनभने कोर मांसपेशीमा, अप्रत्यक्ष भनिन्छ।
मुद्दा व्याख्या गर्न राम्रो साधारण भाषा हो। को eyeball हरेक आन्दोलन कसरी संलग्न मांसपेशीमा मा निर्भर गर्दछ। हामी आफ्नो टाउको खोल्दै बिना बायाँ हेर्न सक्छन्। यो प्रत्यक्ष मांसपेशी आन्दोलन हाम्रो eyeball को तेर्सो विमान बाट दिइएको दूरी भित्र नै हो भन्ने तथ्यलाई कारण छ। खैर, तिनीहरूले अप्रत्यक्ष संयोजनमा परिपत्र पालैपालो प्रदान गर्न, अझै पनि छन्। जो प्रत्येक आँखा लागि व्यायाम पनि समावेश छ। किन? यो व्यायाम मा किनभने आँखा सबै मांसपेशीमा पनि समावेश छ। र हामी सबै थाहा: एक वा अन्य प्रशिक्षण (यो सम्बन्धित छ जो संग कुनै कुरा) राम्रो प्रभाव दिनुभएको, यो शरीर प्रत्येक घटक काम गर्न आवश्यक छ।
तर यो, को पाठ्यक्रम, सबै छैन। त्यहाँ हामी दूरी मा हेर्न, समय मा काम गर्न सुरु कि अनुदैर्ध्य मांसपेशीमा छ। अक्सर, जसको गतिविधि मान्छे, एक कम्प्युटर वा laborious काम संग जोडिएको छ आफ्नो आँखा मा दुखाइ महसुस। र यो तिनीहरूले massaged भने, आफ्नो आँखा बन्द povraschat निचोडा, सजिलो हुन्छ। त्यहाँ दुखाइ छ किन जो छ? मांसपेशी तनाव कारण। तिनीहरूलाई केही, सबै समय काम गर्दा अरूलाई आराम। एक व्यक्ति केही भारी कुरा पूरा भएको थियो भने, आफ्नो हात चोट गर्न सक्ने एउटै कारण लागि छ।
भागहरु आँखा हुन्छन् के कुरा, एक तर ध्यान र "तत्व" असर गर्न सक्दैन। पहिले नै माथि उल्लेख गरिएको छ जो लेन्स, एक पारदर्शी शरीर छ। यो छ - एक जैविक लेन्स, सादा भाषामा यसलाई राख्न। र, तदनुसार, ज्योति refractor ocular उपकरण को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश। खैर, पनि लेन्स एक लेन्स जस्तो देखिन्छ - त्यो लेन्टिकुलर, गोलो र लचिलो छ।
उहाँले धेरै नाजुक संरचना छ। यो बाह्य कारक जोगाउँछ भन्ने Thinnest लेन्स लेपित दानाको बाहिर। यसको मोटाई मात्र 0,008 मिमी छ।
लेन्सलाई विभिन्न रोगहरु उजागर गरिएको छ। भारी - एक cataract। यो रोग मा (उमेर, नियम) व्यक्ति दुनिया नीरस, धमिलो देख्छन्। र यस्तो अवस्थामा, नयाँ कृत्रिम एक लेन्स प्रतिस्थापन। खुसीको कुरा, हाम्रो आँखा यसलाई अन्य भागहरु प्रभावित बिना परिवर्तन गर्न प्रबन्धन कि यस्तो स्थानमा छ छ।
सामान्य मा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, हाम्रो मुख्य संवेदी अंग को संरचना धेरै गाह्रो छ। आँखा सानो, तर तत्व को एक विशाल नम्बर (कम्तीमा 120 मिलियन लाठी सम्झना) समावेश छन्। र यो आफ्नो घटक बारेमा कुरा गर्न लामो समय, तर बतान गर्न सबैभन्दा आधारभूत हुन सक्छ।
इतिहासमा विद्यार्थी चासो गठन
रहस्यमय र unexplored समुद्र जीवन
प्रकृति संरक्षण गर्न: वातावरण बारे उद्धरण
यस वेग कोणीय के हो र यो कसरी गणना गरिन्छ?
चलचित्र "वेन्डेटा" - यो देखिनै पर्छ
हामी सौन्दर्य भान्सा कोनेहरू बनाउछौं आफ्नै हातहरू, निर्माण सुविधाहरू
खराब सास कसरी हटाउन
समुद्र buckthorn रस को गुण। को जाडो लागि समुद्र buckthorn रस: Recipe
Sternoclavicular संयुक्त: संरचना
Champs Elysées। पेरिस
तर "फारसी शाह": आवेदन र समीक्षा
औषधि "Genferon लाइट" - मोमबत्ती। प्रयोग, सङ्केत गर्छ र contraindications लागि निर्देशन